Umlando omfishane kaMiguel Mihura | Izincwadi Zamanje
Umlando we-Miguel Mihura
Umbhali kanye umbhali wokudlala USpanish Miguel Mihura wazalwa ngo-1905 edolobheni laseMadrid. Ekuqaleni kwakhe, ngaphezu kokuba ngumbhali, wayengumdwebi wamakhathuni futhi ngemuva kweMpi Yombango wasungula lo magazini "Izigwaca" lapho amahlaya aqhamuka ekubhekeni ukungahambisani nesikhathi abantu bangaleso sikhathi ababehlala ngaphakathi ezweni.
Imisebenzi yakhe yashayelwa ihlombe kakhulu empilweni futhi bobabili abagxeki kanye nomphakathi jikelele babehlala beziphatha kahle izinto ezintsha zombhali, begcwalisa amakamelo kuwo wonke ama-premieres futhi benikezela amagama amahle emsebenzini wakhe. Ngaphezu kokusebenza kwakhe yedwa, UMiguel Mihurukusebenzisana okwenziwe nabanye ababhali, phakathi kwabo esingagqamisa u-vlvaro de Laiglesia.
Ngaphezu kwabagxeki kanye nababukeli, izikhungo ziphinde zakhombisa ukuwuthokozela umsebenzi wezincwadi kaMihura ngokumnikeza iNational Theatre Award amahlandla amaningi noma ukumenza waba yingxenye I-Royal Spanish Academy, into eyenzeka ngo-1976, sekusele unyaka owodwa anyamalala, selokhu umlobi odumile ashona ngo-1977 esishiya nezinye izingcezu zenkundla yaseshashalazini ezibaluleke kakhulu kuzo zonke izincwadi zethu.
Imininingwane engaphezulu - Itiyetha kuZincwadi Zangempela
Isithombe - ISpain yisiko
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Abalobi » Umlando we-Miguel Mihura
wtf niga niga
laodmd kfmf kusho
Yini le? Lezi aziphenduli. Ubani ongacabanga ukukwenza lokhu? Ngiyethemba ukuthi bazifundile ngoba babambekile ngoba bakhombisa izinto ezingafani nomthondo.
Phendula ku-laodmd kfmf f
Umlando kaBuero Vallejo
Itheyetha yamahlaya aseSpain yekhulu lama-XNUMX leminyaka